Faucet milentika fandroana miely amin'ny Pop Up Drain Matte
Home / Fitaovana efitra fandroana efitra fandroana / Faucets fandroana miely be / WOWOW 2 Tantano 8 mirefy Faucet milentika amin'ny fandroana fandroana rano miaraka amina fantsom-panafangaro Matte Black Basin Faucet Mixer
WOWOW 2 Tanana 8 mirefy Fanaparitahana fandroana fandroana miadana miaraka amin'ny Pop Up Drain Matte Black Basin Faucet Mixer
Ny tombony azo avy amin'ny fandroana fandroana fandroana fatratra amin'ny fehiny:
FAUCET VANITY PREMIUM- Ny tena vatana sy mpampifandray ny faucet mainty dia vita amin'ny varahina mafy, adidy mavesatra ary maharitra. Ny loko mifanaraka amin'ny fantsom-pifandraisana pop-up sy ny fantsom-panafody nankatoavin'ny cUPC dia tafiditra ao.
TEKNOLOGIANA CONNET QUICK CREATIVE- Ny fametrahana miavaka "Y" endrika mampifandray haingana dia mora ny mametraka azy ary mamonjy ny vidin'ny fantson-drano.
Matte BLACK FINISH- Low-key amin'ny famaranana mainty madio, famolavolana spout avo tsy manam-paharoa amin'ny famoronana fomba fanaingoana fandroana maoderina. WOWOW dia manisy sosona glase famehezana eo amin'ny faritra mainty izay afaka manohitra ny loto sy ny harafesin'ny fampiasana isan'andro.
FAUCET SWIVEL 360 DEGREE- Tanana roa, endrika 3 no mety amin'ny fifehezana ny mari-pana amin'ny rano. Tendrombohitra 3-lavaka miaraka amina endrika 8-inch mivelatra, ny halavirana dia azo ovaina arakaraka ny tena takiana aminao.
Warranty CUSTOMER SUPPORT - Fiantohana 5 taona sy fanampiana ny mpanjifa no atolotra. Rakotra fiverenana 90 andro izy io. Raha manana fanontaniana ianao dia aza misalasala mifandray aminay.
Matte Black, kilasika tsy mety maty, ary io no fironana izay tsy mihemotra na oviana na oviana. Ho an'ny lahatsoratra ao an-trano, ny mainty dia avo lenta sy mateza hatrany. Noho ny lazan'ny fomba minimalista dia nanosika mainty ho amin'ny seza fiandrianan'ny loko mahazatra izy io. WOWOW Faucet, manampy anao hamorona fiainana vaovao…
Faucet adidy mavesatra
● Vatana fauxety vita amin'ny varahina sy varahina mafy
● Ny famoronana haingana dia mampifandray ny fanamboarana
● Mora apetraka irery fa tsy misy mpantsaka
Aerator azo esorina
● Mety kokoa ny manadio
● Azo esorina amin'ny fanadiovana tsy misy fitaovana
Tonga miaraka amin'ny tatatra miloko iray ihany
● Nohavaozina Pop up Drain Stopper misy lavaka mihoampampana
● Mora kokoa ny mametraka noho ny fanarian-tsoratry ny tehina nentim-paharazana
Inona no ao anaty kitapo
● fantsona fandroana mainty x 1
● Fitaovana 1; 1 x mipoitra tampoka mainty; 1 x Y mampifandray haingana
● fantsona rano 2x 60cm CUPC
SKU: 2320500B Sokajy: Fitaovana efitra fandroana efitra fandroana, Faucets fandroana miely be Tags: paompy mixer vovo, miely patrana
11.14 X 10.2 X 3.23 santimetatra
Faucet efitra fandroana Centerset WOWOW miaraka amin'ny pop-up Dra ...